FAQ Ngezihluzo ze-TOFRE Herbal-Sichuan King Continental Blotechnology Co. Ltd.
1.Ndingazithenga njani iimveliso ze-TOFRE?
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu kwaye ufuna ukuzama, unokushiya ulwazi lwakho loqhagamshelwano kwaye usithumele kuthi nge-Qhagamshelana nathi iphepha, okanye uqhagamshelane namaqabane ethu okusasaza asekuhlaleni emhlabeni wonke ukuze uthenge.
2.Yintoni iteknoloji ye-TOFRE?
Isiseko soPhando noPhuhliso lothotho lweemveliso ze-TOFRE zonke zisekwe kwisakhono esinamandla selabhoratri yethu yokwenziwa kwezinto ezintsha ngamayeza.Injongo yethu yantlandlolo kukudibanisa ubuchwephesha bamayeza athathwe kwizityalo zendalo, kunye neyeza lemiphunga ukwenza indlela enempilo yokutshaya kuzo zonke iintlobo zabantu abatshayayo.
Ukuba unomdla, nceda ubhekisele kwintshayelelo eneenkcukacha yeemveliso zethu kumgaqo weemveliso ezithile.
I-TOFRE Herbal Filters
1.I-TOFRE yahluke njani kwezinye iimveliso ezithelekisekayo?
Ngokwahlukileyo kuzo zonke izihluzo zemveli ezenziwe ngentsimbi okanye izinto zekhemikhali kwimarike, i-TOFRE Herbal Filter yeyona yokwenyani&kuphela yokucoca isigarethi esinesakhiwo esicocekileyo semifuno, esamkela ubume be-capsule kwaye zonke iifomyula ziyahlangabezana nemigangatho yokutya.
Ifomyula yethu ekhethekileyo ye-herbal innovation iyenza i-100% igcine incasa yokuqala yomsi, ngelixa inokuhluza i-tar, i-carbon monoxide kunye nezinye i-carcinogens emsini.Emva kokusebenzisa i-TOFRE, uya kufumanisa ukuba ukutshaya kuba lula kwaye kucoceke.
2.Ziziphi izithako ze-TOFRE Herbal Filters?
Ulwakhiwo lokucoca aluqulathanga naziphi na izinto zetsimbi okanye iikhemikhali zokucoca, kwaye sisixhobo sokucoca isityalo se-capsule.
Impahla yeqokobhe langaphandle: iplastiki yebakala lokutya
Umxholo weCapsule: iti polyphenols, theanine, Cordyceps sinensis, nano selenium iti powder
3.Ingaba i-TOFRE Herbal filter iyayinciphisa itela, isinyithi esinzima kunye nezinye izinto eziyingozi?
I-TOFRE yenza i-100% isiqinisekiso kumava apheleleyo okutshaya icuba ngelixa ihluza i-tar kunye nezinye i-carcinogens, ukuze abatshayayo bafumane amava afanelekileyo okutshaya okwangoku bafezekise injongo enempilo kunye nokunciphisa ingozi.Kwicuba ngalinye, i-TOFRE ihluza i-67% yezinto ezinobungozi kunye ne-27 yegesi eyingozi.
4.Zingaphi iisigarethi ezinokusetyenziswa nge-TOFRE Herbal Filter enye?
I-TOFRE ingasetyenziselwa i-cigarettes ye-20 ngokuqhubekayo, kwaye isihluzo ngasinye sinokufakwa lula kwi-cigarette case emva kokuba ikhutshwe, ekulungele ukuthwala kunye nokusetyenziswa kwansuku zonke.
5.Ngaba ndingasebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zecuba kwi-TOFRE Herbal Filter?
I-TOFRE ifanelekile kuzo zonke iintlobo zecuba: I-Right / Regular / Slim
Isihluzo esi-1 sepakethi yecuba
6.Xa usebenzisa i-TOFRE Herbal Filter, ingaba iya kuchaphazela incasa yokutshaya?